April 8, 2020 NEWS 3
GAROOWE(P-TIMES) – Urur siyaasadeedka KAAH oo ka mid ah 17 Urur oo ay dhawaan diwaangaliyeen Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland, ahna Ururka Xukuumadda Puntland ayaa durba bilowday is haysi xoog badan dhexdiisa ah, waxaana sida ba’an iskugu haysta xubno katirsan golaha Wasiiradda ee Xukuumadda iyo Saaxiibada gaarka ah ee Madaxweyne Deni.
Is heysiga ayaa soo bilowday asaaskii Ururkan, waxaana abaabulkiisa ugu weyn qaatay xubno katirsan golaha Xukuumadda, kuwaas oo u xilsaaray Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, waxayna kala ahaayeen Wasiirka arrimaha gudaha, Wasiiru dowlaha Wasaaradda Cadaaladda & Wasiirka Duulista Hawada, taasi waxay kaliftay in ay talaabadas caro ka muujiyaan saaxiibada Madaxweyne Deni ee loo yaqaano (Iskaashatada Shaydaanka).
Doodaha xiisaha leh ayaa ah in ay Saaxiibada Madaxweynuhu dadaal badan galiyeen sidii ay u joojin lahaayeen mashruuca markii koowaad, laakiin markii labaadna ay waqti galiyeen sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayen ururka dawladda, laakiin caqabado ayaa ka horyimi ay ka mid yihiin sida ay saameyntaas u yeelan lahaayeen.
Wasiirka maaliyadda ee Puntland Xassan Shire Abgaal iyo saaxiibkiisa u dhaw Madaxweyne Deni ee Maxamuud Warsame Shido, waxay min labo goor la kulmeen qaar kamid ah dhalinyaradda beelahooda gaarka ah oo ay kala hadleen sidii ay taageero Xisbiga ugu noqon lahaayeen.
Ujeedadu waxay tahay in ay helaan awood ay Ururkan ku darsadaan, laakiin diidmo xoog leh ayay la kulmeen, waxay balan-qaaden Shaqooyin iyo dhaqaale xoog leh, laakiin wali ma jirto in ay heleen tiro kufilan oo ay saameyn ugu yeelan karaan Ururkan.
Sidaas oo kale is haysi xoog badan ayaa ka jiray maalmihii lasoo dhaafay cida noqonaysa gudoomiyaha KMG ah ee Urur Siyaasadeedkan, waxaana Iskaashatadu ay diideen in uu jagadan qabtaan sadex kamid ah xubnaha asaasay Ururkan oo ah wasiiro katirsan Xukuumadda Puntland, waxayna sheegeen in aysan macquul aheyn in ay hoggaanka qabato cid aan ayaga aheyn.
Dood iyo is khilaaf dheer ka dib, Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo ay arrimahan si dhaw u gaarayeen, ayaa wararku sheegayaan in uu go’aamiyey in uu xilkan isagu si KMG ah u hayo, waxaana howlaha hadda u wada Wasiirka arrimaha gudaha, taas oo ka dhigan in aysan Saaxiibadiisa gobalka Nugaal u arkin talaabadaas mid dhexdhexaad ah.
Is hardiga cusub ayaa sidaas oo kale saameyn ku leh arrimaha siyaasadda ee hadda taagan, kooxda ayaana isku aragta in taladooda inta badan ay hadda kusoo yaraanayso in uu qaato Madaxweyne Deni, waxayna taas badalkeeda xooga saarayaan sidii ay ula dagaalami lahayeen Wasiiro katirsan Xukuumadda oo ay aaminsan yihiin in ay qeyb ka yihiin qorshe cusub oo daaqada looga saarayo iyaga.
Qaladka straatijiga ah ee ugu weyn ee ay ku dhaceen madaxweyneyaasha Farmaajo iyo Deni ba waxaa weeye in ay iyaga oo xilka madaxweyne weli haya ay ku dhawaaqeen xisbiyo siyaasadeed ee ay iyagu soo dhiseen. Marka hanaanka dowliga ee caddaaladda iyo sinnaanta iyo siyaasadda hufan salka ku haya wax lagu cabbiro sidani ma aha sidii saxsanayd ee looga fadhiyay in ay wax u dhacaan.
Waxuu waajibku ahaa in marka hore isku waqti iyo fursad cayiman la siiyo ay guddiyo ku dhistaan inta xiiseynaysa in ay xisbiyo siyaasadeed furtaan. Xisbiga madaxweynuhu waxay ahayd in loo xil saaray dad kale oo isaga ka baxsan oo diiwaan galinta u qaabilsan. Ugu dambeyntii isku mar ayaa la doonayay in ay xisbiyadu warbaahiyeyaasha hortooda isku iclaamiyaan oo ay isku mar wada hawlgalaan iyada oo uusan madaxweynuhu toos uga muuqanin ama se horseed xisbiga toos uga ahayn.
Sideeda ba, anigu waxaan ka tirsanahay dadka aadka uga soo horjeeda in nadaamka axsaabta badan habka waddamada shisheeye looga dhaqmo dalkeena lagu dhaqan galiyo, sababo dhowr ah aawadooda. Laakiin waa mowduuc aan mar kale akhyaarta la wadaagi doono haddii uu Rabbi idmo.
Puntlandtimes website-kan c/weli Gaas, mucaaradka cusub ee Puntland, ku lahaa ISKAASHATA SHAYDAANKA waa Eraygii Gaas u bixiyay Aaran-Jaan, markii Laamigii Garoowe iyo Gaalkacyo u dhameeyay ee cunay la weydiiyay.
Sida aan u badinayo dad magacyo badan webkan ku soo gala oo ku weerara ayaa nagu dul meereysanaya oo ah guulwadeyaal SNM iyo USC ee uu qasadkoodu yahay in ay gobta reer Puntland gorodda isugu galiyaan been iyo barabagaan qayaxan oo aad u jecel in ay Puntland isku dhex yaacdo, sida kan “Yoocada”, Warqabe” iwm isku hoos qariya.
Haddii ay dadka webkan ku xeerani ku jiraan kuwo gaar ahaan tolka Majeerteen ka dhashay oo naxliga lagu abuurayo waxaan gacaleyaal idiin ka digayaa in aydun nacabka isu jabinin oo aan la iskiin qaniinsiin. Si taxadar leh uga feejignaada cadawga halaqa nagu noqday ee webabkeena Puntland ku soo batay.